Imiyalelo yokuphepha komlilo ehhovisi ilawula izenzo zabasebenzi ngesikhathi besengozini yomlilo noma intuthu emsebenzini. Okuqukethwe kwemfundo inikeza imisebenzi yabantu ababhekene nokukhishwa kwabasebenzi kanye nezimpahla ezibonakalayo zenkampani.
Njengoba imfundiso yokuphepha komlilo ithi, uma izici ezibonisa ukutholakala komlilo (iphunga lomusi, ukushisa, ukubhema, ukushisa kwamazinga okushisa ekamelweni, ukubona isisindo nokuvutha umlilo) kutholakala, abasebenzi bezinhlangano kudingeka ba:
- ngokushesha ushayele ukuvikelwa komlilo ngocingo "01" noma "112" (kusuka ku-mobile telecom operators), xhumana nezixhumanisi zakho (ikheli, igama lenhlangano, indawo nesikhathi sokuthola umlilo, kanye nedatha yakho yomuntu kanye nenombolo yocingo);
- nqamula wonke amadivayisi asebenzisa inethiwekhi kagesi;
- ukuqhubeka nokuqedwa kwemililo;
- ukwazisa ngomlilo wabasebenzi kanye neziphathimandla eziphakeme;
- uma kukhona isignali engozini, shiya izakhiwo ngokuphuthumayo ngokuhambisana nesiphakamiso sokuphumula ebhizinisini.
Imithetho ejwayelekile yokuphepha komlilo ilawula izenzo zenhloko yenhlangano. Inhloko yeyunithi yenhlangano, eyafunda ngomlilo, ibophekile:
- Shayela isevisi yomlilo efonini "01" noma ngokubiza opharetha amaselula "112";
- ukwazisa bonke abasebenzi kanye nokuphathwa kwebhizinisi mayelana nalesi sigameko;
- kubika umlilo kumuntu onomthwalo wemfanelo esiteshini (enhlanganweni) ukuphepha komlilo kumuntu;
- ngaphambi kokufika kwabacimi bomlilo, kubalulekile ukuzimela ngokuzithandela izinyathelo ezikhona zokuqeda umthombo womlilo, ukukhishwa kwabasebenzi, impahla ebalulekile nemibhalo.
Imiyalo evamile yokuphepha komlilo inquma ukuthi ubani ophethe ukuphepha komlilo kule ndawo, lapho efika endaweni yesehlakalo yenzeke:
- Bika kabusha izisebenzi zomlilo ngolwazi mayelana nokuvela komlilo, kanye nokwazisa inhloko (umsunguli) wenhlangano ngalokho okwenzekile;
- uma kwenzeka usongela ukuphila nempilo yabantu, thatha izinyathelo zokubakhulula futhi uphume kuzo zonke izindlela ezitholakalayo;
- ukumisa ngokuphuthumayo noma yimuphi umsebenzi ekwakheni, ngaphandle kwalabo abahloswe ukuqeda umlilo;
- ukwenza ukuphuma kwamandla nokuvimbela umlilo nokubhema ezakhiweni;
- ususe endaweni yengozi bonke abasebenzi kanye nabanye abantu abangabambi iqhaza ekuqedeni imililo;
- ukufeza ukuphathwa kwezinyathelo zokuqeda umlilo ngaphambi kokufika kwemisebenzi yomlilo;
- kanye nokuqedwa komlilo, thatha izinyathelo eziphuthumayo zokukhipha izisebenzi kanye nezimpahla ezivela kumabhizinisi;
- qinisekisa ukuthi izidingo zokuphepha komlilo zihlangana nabasebenzi abahlanganyela ekuqothulweni komlilo;
- ukuhlangabezana nabacimi bomlilo abafika esakhiweni, futhi babonise indlela emfushane kakhulu yokungena emlilweni.
Njengoba umyalelo wokuphepha komlilo uthi, lapho kufika amakamelo okuvikelwa komlilo endaweni yesehlakalo, umuntu ophethe ukuphepha komlilo kufanele anikeze ulwazi kumphathi womlilo ngomsebenzi wokwakhiwa kwesakhiwo, izakhiwo eziseduze nezakhiwo ezihlukahlukene, izinto eziyingozi zomlilo ezigcinwe noma ezisetshenziswe ebhizinisini, Futhi izakhiwo. Kudingeka futhi unikeze ngolunye ulwazi oludingwa ngabacimi bomlilo ukuvimbela ukuvela kwemililo.
Kanjani ukubuyela intela kusuka ukuthenga indawo? Zonke ezicashile kubanjwe impahla
Lapho kugujwa uSuku Lomhlaba Wonke amahlengethwa nemikhomo?